Zvidhinha factory - China zviyero vagadziri, vatengi
Calibration zviyereso OIML CLASS E1 cylindrical chimiro, simbi isina kukwenenzverwa
E1 zviyero zvinogona kushandiswa seyakajairwa chiyero mukuyera mamwe masimbi eE2, F1, F2 nezvimwewo, uye zvakakodzera kuenzanisa yakakwira-chaiyo yekuongorora uye yakakwira-chaiyo yekukwirisa mizinga yekukwirisa. Zvakare Kuyera kwezviyero, zviyero kana zvimwe zvigadzirwa zvine huremu kubva kuLabhoritari, Mishonga Mafekitori, Makero Mafekitori, nezvimwe
Calibration zviyereso OIML CLASS F1 cylindrical, simbi isina kukwenenzverwa
Zviyero zveF1 zvinogona kushandiswa seyakajairwa chiyero mukuyera zvimwe zviyero zveF2, M1 nezvimwewo, uye zvakakodzera kuyera yakakwira-chaiyo yekuongorora uye yepamusoro-chaiyo yekukwirisa mizinga. Zvakare Calibration yezviyero, zviyero kana zvimwe zvinorema zvigadzirwa kubva kuMishonga yeMafekitori, Masikero Mafekitori, nezvimwe
Kuyera uremu OIML KLASI M1 cylindrical, simbi isina kukwenenzverwa
M1 zviyero zvinogona kushandiswa sereferenzi mwero mukuyera zvimwe zviyero zveM2, M3 nezvimwewo Zvakare Kuyera zviyero, zviyero kana zvimwe zvigadzirwa zvine huremu kubva murabhoritari, Mishonga Mafekitori, Masikero Mafekitori, michina yekudzidzisa yechikoro nezvimwe.
Calibration zviyereso OIML CLASS F2 cylindrical, simbi isina kukwenenzverwa
Zviyero zveF2 zvinogona kushandiswa seyakajairwa chiyero mukuyera zvimwe zviyero zveM1, M2 nezvimwewo Zvakare Kuyera zviyero, zviyero kana zvimwe zvigadzirwa zvine huremu kubva kuFemaceutical Mafekitori, Masikero Mafekitori, nezvimwe
Calibration zviyereso OIML CLASS E2 cylindrical, simbi isina kukwenenzverwa
E2 zviyero zvinogona kushandiswa sereferenzi standard mukuyera mamwe masimbi eF1, F2 nezvimwewo, uye zvakakodzera kuyera yakakwira-chaiyo yekuongorora uye yakakwira-chaiyo yekukwirisa kutakura zviyero. Zvakare Calibration yezviyero, zviyero kana zvimwe zvinhu zvine huremu kubva kuLaboratari, Chemishonga Mafekitori, Masikero Mafekitori, nezvimwe
ASTM yemunhu calibration uremu 500g kusvika 50kg rectangular chimiro
Zviyereso zvese zvakagadzirwa nesimbi isingaite simbi kuti zviite kuti ngura isaramba.
Zviyereso zveMonobloc zvakanyatsogadzirirwa kugadzikana kwenguva yakareba, uye zviyero zvine mhango yekugadzirisa zvinopa kukosha kwakanyanya kwemari.
Electrolytic makorari inovhenekera nzvimbo dzinoonekera dze anti adhesion mhedzisiro.
ASTM uremu 1 kg -5kg seti anowanikwa mune inokwezva, yakasimba, yepamusoro, patent aluminium bhokisi ine inodzivirira polyethylene furo uye
Kurema kweASM cylindrical chimiro kunoenderana nekirasi 0, kirasi 1, kirasi 2, kirasi 3, kirasi 4, kirasi 5, kirasi 6, kirasi 7.
Aluminium bhokisi rakagadzirwa nenzira yakanakisa yekudzivirira nemabumpers ayo ayo masimbi anodzivirirwa munzira yakasimba.
Heavy-basa CAST-IRON M1 zviyero 500kg kusvika 5000 kg (Roller dhizaini)
Yese yedu Cast Iron Calibration Weights inoenderana nemitemo yakatemwa neInternational Organisation yeMitemo Metrology uye ASTM tsika dzeClass M1 kusvika M3 cast -iron uremu.
Kana zvichidikanwa kuzvimirira chitupa kunogona kupihwa pasi pechero kupihwa mvumo.
Bhawa kana Ruoko Kurema zvinopihwa zvakapedzwa mune yepamusoro mhando Matt Nhema Etch Primer uye yakaenzana kune akasiyana mamirire ekutsungirira aunogona kuona mune yedu chati.
Maoko Ekubata anopihwa apedzwa mune yepamusoro mhando Mat Black Etch Primer uye r Weights
ASTM calibration weights akaiswa (1 mg-1 kg) cylindrical chimiro
ASTM SS yekudyara kukanda / yakarasika wakisi yekukanda mhando bvunzo zviyero rectangular chimiro 500g kusvika 20kg
Slotted CAST-IRON M1 zviyero 1 g kusvika 50 kg
ASTM calibration weights akaiswa (1 mg-2 kg) cylindrical chimiro
ASTM isina simbi Knob inogadzirisa yekugadzirisa bvunzo zviyero 1g-20kg
Calibration Zviyero zveDhijitari Scales, Certified Weights, Scale Kuchengetedza Kurema, Kuyera Kurema Set, Sheuri Beam Load Cell, Kuchengeta Misa,